Ukususela kumaxesha amandulo, abantu babecinga ukulibaziseka ubudala. Kwaye ngexesha lethu elihamba phambili le ngxaki ibaluleke kakhulu. Amachiza anamhlanje kunye ne teknoloji inokuthi, ukuba ungenakwandisa ubomi kwixesha elide umntu angathanda ngalo, ke unike isibonelelo sesibini (sesithathu ...). Kukho iintlobo ezininzi zonyango eNtshona. Ndifuna ukubeka ingqalelo ngokukhawuleza ekuhlaziyweni komzimba ngoncedo lwezonyango zokuguga. Uphinde uthembisa ukuvuselelwa kunye nobuhle.
Yintoni ekhokelela kwigama elingaphandle kwelanga "unyango lokuguga"?
Kulula kakhulu: isichazi esithi "ukuguga ukuguga" yintlobo yesipelisi "ukuguga ukuguga". Olu unyango lusekelwe kwimpumelelo yonyango olutsha kwaye linikeza abantu ubuncinane ukuba banciphise iinkqubo zokuguga ezingenakukhunjulwa zomzimba. Kukuncipha, kuba le nkqubo ayinakuphelelwa. Isigulane kufuneka siqonde oku. Kodwa akusiyo ithemba elihle lokuhlala iminyaka "yegumbana legolide" lexesha labantu ngaphandle kwezifo ezikhuphayo?
Iingcali kuqala ziqwalasela ukungafani phakathi kwezinto eziphilayo kunye neminyaka. Kwaye kubonakaliswa ukuba abafazi kunye namadoda bahluke. Eyokuqala, lo mmahluko uqala ukubonakalisa ukususela kwiminyaka engama-30 kuya kwe-40, okwesibini - ukususela kwiminyaka eyi-35 ukuya kwe-45. Iimvelaphi "zikhula" ziphilayo ngokwelo xesha. Kwaye izimo ezimbi zanamhlanje aziphuculanga umgangatho wazo.
Ulwaphulo lokuguga luyinkimbinkimbi yeenkqubo ezijoliswe ekuvuseleleni umzimba. Iingcebiso zinikezwa ngugqirha olwachasayo. Lo ngugqirha onguchwepheshe ekuguga komzimba. Ekuqaleni, kukho iimvavanyo ezininzi. Ngokomzekelo, izinga le-collagen, isixa seshukela egazini, inani le lipids lichongiwe. Emva kokuba ingcali ikhetha ukuba umehluko phakathi kweminyaka, i-biological and real, kwaye inikezela ngemisebenzi emininzi eyinceda ukuthoba ukuguga ngaphambi kokudala nokuphelisa iziphumo zayo. Ngokuqhelekileyo, izigaba zilandelayo:
Ngoncedo lonyango, umzimba uhlambulukile kwaye ubuyiselwa kubuzimba;
Izinto eziphilayo ezisebenzayo ziyaziswa ekudleni. Baye baxhomekeke ekukhawulezeni kweenkqubo zokutshintshisana kunye ne-oxidation;
Isigulana sibheke uviwo olupheleleyo lwezonyango ukwenzela ukuchonga i-pathologies kunye neprobable foci yezifo.
Iingenelelo kunye nokungalunganga kwezilwanyana eziguga ukuguga.
Inzuzo engenakukhunjulwa yonyango lokulwa nokuguga yinkimbinkimbi yemiphumo yonyango lobugcisa kunye nokuvuselelwa kwangaphakathi. Ngokuqhelekileyo kumaziko ezonyango kunconywa ukuba uphinde uvuselele ubuso. Nangona kunjalo, ingcinezelo-ukuguga komzimba ngokupheleleyo-ayiqwalaselwe ngezizathu ezahlukeneyo.
Ukuhlaziywa kwangaphandle ngoncedo lolu cwangciso luquka iinkqubo ezinjengeembambano zobuso, ukukhangela, ukuphakamisa, ukukwazi ukuguqula umzi womzimba nge-liposuction. Ukunyamekela umzimba xa usebenzisa i-massage inkqubo kunye nezinto eziphilayo ezisebenzayo eziyingxenye yeendiza ezahlukahlukeneyo, ukunyuka. Kwakhona i-massage ye-massage kunye ne-cosmetology ye-hardware.
Ubunzima bokuhlaziywa kwangaphakathi kubandakanya ukutya okuthe ngqo, okwenziwe kuphela kwisigulane esithile, ngaphandle kokutya, uludwe lweenkqubo ezijoliswe ekusebenziseni izibonelelo ezibalulekileyo zomzimba zicetyiswa. Ukumiswa kwe-metabolism kunye nejoyi kunye nama cell stem amahle.
Kwinkqubo yokusebenza kwezibonelelo ezibalulekileyo, ukuphuhliswa okutsha kwimizimba ye-dietetics, i-genetics, kunye neengqondo zixhunyiwe. Ngasecaleni akukho magatsha afana ne-dermatocosmetology kunye ne-immunology.
Ukubeka esweni rhoqo iingcali. "Umgangatho" weenkqubo ezicetyiswayo zihlaziywa rhoqo. Ukusetyenziswa kwamachiza kulungiswa, kuhlaziywa, nokuba isiphumo sesondlo esinconywayo siphumelele ...
Iintsilelo zonyango lokulwa nokuguga.
Amaziko kufuneka aphile ixesha elide. Iibutho ezibonelela ngolu hlobo lwenkonzo zifumaneka kakhulu kumaziko amakhulu nakwii-capital. Ngako oko, olu unyango lufumaneka kwinqanaba elincinci labantu. Iinkqubo ezenziwayo akunakwenzeka ngaphandle kokuqwalaselwa rhoqo.
Iindleko. Ulwaphulo lokuguga luya kuhlawula iwaka leedola ezili-US kunye nezinye.
Amalungiselelo eHormonal. Oku kubini ubuhle kunye nokungalungi. Kukho imibono ephikisanayo ngokusetyenziswa kwabo.
Ngubani na onyango lokuguga, ngubani na onokuyisebenzisa kwaye kufuneka ayisebenzise?
Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba ubuchopho bomntu buqala ukudala iminyaka engama-45. Ngama-60, iziphazamiso zesifo ziqala ukubonakalisa, eziza kubangela izifo ezintsha. Ukukwazi ukuyeka konke oku kwaye uyitshintshe encinci, yinyani.
Sebenzisa olu unyango kufuneka lube nokubonakala kwesifo se "ukukhathala okungapheliyo", kunye nelizwe elidandathekayo elide ixesha elide, nokunganakwa kwinto yonke. Xa kukho iingcinga malunga nokuzibulala kunye nokungalingani komoya. Ngongquzulwano olwandisiweyo kunye nabameli bamaqela ahlukeneyo. Xa kwakunomvakalelo obangelisekiyo ngokuzithemba ngenxa yeemfuno ezingaphunyekanga.
Akungathinteki ukuba impilo yomntu wonke, kubandakanywa nomoya ongaphakathi, ngama-50 ekhulwini axhomekeke ngqo kumntu ngokwakhe. Kukho iingcali ezininzi ezinika ithuba lokuhlala ubomi obulisekileyo, obonwabileyo, engathwalwanga zizifo ezingenakuguquka. Iingcali eziguga ukuguga zincoma wonke umntu ukuba asebenzise isiseko sonyango lokulwa nokuguga ebomini babo. Indlela yokuphila enempilo kunye neengcebiso zabo ziya kwandisa ngamanye amaxesha umgangatho wobomi babo bonke abantu.
Izinyathelo ezili-10 zokuPhelela kwePlastiki
Ngaba ndingakwazi ukulungisa i-tattoos?
Ubuso buso buso ngokuchasene nokuguga
I-Detox kwisixeko esikhulu: umgca wemveliso yokunyamekelwa kwesikhumba i-Givenchy Vax'In yeSixeko soLutsha IsiSombululo seSikhumba
Indlela yokwenza inhlama yepakeki: iindlela zokupheka ezithandwa kakhulu kunye nezithombe
Iimpawu zokutsala uthando oluhle kunye nomtshato
Izenzo ezenza siswele
Umtshato emva komtshato
Ukutya, iinzuzo kunye nenzakalo
Ukubhiyozela uNyaka omtsha we-2017 umnandi, owokuqala, omhle kwaye ungabizi. Yintoni ukupheka kunye nendlela yokulandela imiqondiso yonyaka ka-2017 we-Rooster
Esinye isiqingatha siyinyanzeliso